မီးပြတိုက်: See You At The Top
Posted by SLIP in See You At The Top
ပြင်းထန်သော ဆန္ဒဖြင့် တိကျသော ရည်မှန်းချက်ထားရှိပါ။
ပန်းတိုင်သို့ မည်သည့်အချိန်တွင် ရောက်ရှိရမည်ဟု သက်မှတ်ပါ။
ရည်မှန်းချက် ဘာလဲဆိုတာကို စာဖြင့်ရေးချထားပါ။
မည်သို့ သွားရမည်ဟူသော လုပ်ငန်းစီမံချက် ချမှတ်ရမည်။
ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရေးကို နေ့စဉ်တွေးပါ။
မိမိ လုပ်ငန်းအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါ။
ရေးဆွဲထားသည့် စီမံချက်အတိုင်း မနေမနားကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါ။
အခြားသူတို့၏ အားလျှော့စေတတ်သော အကြံပေးချက်များကို လက်မခံပဲ နားပိတ်ထားပါ။
မိမိအစီအစဉ်အတိုင်း ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အားပေးအားမြှောက်ပြုမည့် မိတ်ဆွေများနှင့် ပူးပေါင်းပါ။
အနှစ်မရှိသော အလုပ်များ ဖြင့် အချိန်ဖြုန်း ပျော်မွေ့နေသော ပတ်ဝန်းကျင်မှ ရှောင်ထွက်ပါ။
မိမိ၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို သိပါ။ သိအောင်လုပ်ပါ။
ထကြွ လုံ့လ ၀ီရီယ ရှိပါ။
အခွင့်အရေးရတုန်းမှာ ယူထားပါ။ မလွတ်ပါစေနှင့်။ မိုးရွာတုန်းရေခံ။ မိုးရွာတာက ကံ။ ရေခံတာက ၀ီရီယ။
ဝေဖန်မှုကို ခံယူပြီး အကျိုးရှိအောင် ပြုပြင်ပါ။ မခံချင်စိတ်အပေါ်တွင် နာကျင်မှုနဲ့ မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုးပြီး အသီးအပွင့်များကို ခူးယူ စားသုံးပါ။
ပြောသင့်တာနှင့် လုပ်သင့်တာကို ချင့်ချိန်ခွဲခြားတတ်သူဖြစ်ပါစေ။
ငြင်းခုန်ခြင်း၊ ရန်ဖြစ်ခြင်း စသော ပဠိပက္ခများကို အထူးရှောင်ပါ။
ငွေစုပါ။ ငွေမည်မျှ ရှာဖွေနိုင်သည်မှာ အဓိကမဟုတ်၊ မည်မျှ စုဆောင်းနိုင်သည်မှာ အဓိက ဖြစ်သည်။
ပညာအရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကို တည်ဆောက်ပါ။
ပြောရဲဆိုရဲ၊ လုပ်ရဲကိုင်ရဲ၊ တွေးရဲတောရဲ ရှိပါ။
ဂုဏ်သိက္ခာကို သန့်ရှင်းဖြူစင်အောင် ထိန်းသိမ်းပါ။
သိမ်ဖျင်းတဲ့ တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ စကားမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမဖြတ်နဲ့။
သင်၏ သီးသန့်ဘ၀ကို တသီးတသန့် ဖြစ်ပါစေ။
သင့်လျှို့ဝှက်ချက်ကို သင့်အင်္ကျီပင် မသိပါစေနှင့်။
ကျောက်ခဲတစ်လုံးကိုပဲ နှစ်ခါ ခလုတ်မတိုက်မိပါစေနှင့်။
သတိရှိပါ။ သတိသည် လုံခြုံခြင်း၏ မိခင်ဖြစ်သည်။
ယနေ့လုပ်နိုင်တာတွေကို မနက်ဖန်လုပ်ဖို့ ချန်မထားပါနှင့်။
အချိန်၏ တန်ဖိုးကို နားလည်ပါ။
မိတ်ဆွေကောင်းများကို ထိန်းသိမ်းပါ။ မိတ်ဆွေများနှင့် အချေးအငှား၊ အချေးအယူ မလုပ်ပါနှင့်။
လောင်းကစား၊ မိန်းမနှင့် အရက်ကို ဝေးဝေးကရှောင်ပါ။
သင့်ဘ၀ကို လုပ်ငန်း၊ အဖွဲအစည်းတစ်ခုခု (သို့) လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထံသို့ အူလှိုက် အသည်းလှိုက် ပုံမအပ်သင့်ပဲ ပုံမအပ်ပါနှင့်။
ခင်မင်မှုကို တန်ဖိုးထားပါ။ ချစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ခွဲခွာရမည်ကိုလည်း မကြောက်ပါနှင့်။
သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ကွန်ယက်ကို ဖြန့်ကျက်ပါ။
တာဝန်ယူစိတ်ရှိပါ။ တာဝန်ကျေပွန်အောင် ပြင်းထန်သောဆန္ဒကို မွေးမြူပါ။
မိမိ၏ လုပ်ရပ်သည်ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်နေပြီဟု ယုံကြည်လျှင် လျှော့လုပ်ပါ။ ရည်မှန်းချက်ကို အထောက်အကူပြုသည်ဟု ယုံကြည်လျှင် ပိုလုပ်ပါ။ အမှားကိုမြင်လျှင် အမှန်ကို ချက်ချင်းပြုပြင်ပါ။ အမြင်သစ်အမြင်မှန်ကို အမြဲကြိုဆိုလက်ခံပါ။
သင်သည်နေကို မျက်နှာမူလိုက်ပါ အရိပ်များသည် အနောက်ဘက်တွင် ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်။
ko globel says 14 October 2008 at 22:16
ဒီနည်းတွေ အတိုင်းကျင့်ရင်တော့ ဆန္ဒ နဲ့ ဘ၀ တစ်ထပ်တည်း ကျမှာ သေချာပါတယ်
thihanyein says 15 October 2008 at 19:03
အင်း ဘ၀တက်လမ်း လမ်းညွန်စာအုပ်တွေထဲမှာတောင် ဒီလောက် မပြည့်စုံလောက်ဘူးထင်တယ်
My Wonderful Moral Thoughts says 17 October 2008 at 05:37
ကောင်းလိုက်တဲ့ Post ကလေး။
ဝေမျှတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
Anonymous says9November 2008 at 06:08
ကောင်းလိုက်တဲ့ပိုစ့်ပဲဗျာ။ လိုက်နာစရာတွေ တစ်ပုံချည်းပါပဲကလား။ ဝေမျှတာ ကျေးဇူးအထူး။
တက်လူငယ် says9November 2008 at 20:23
ဒီအချက်တွေကိုသာ အမှန်တစ်ကယ်လိုက်နာနိုင်ရင် သေချာပေါက် လိုရာပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အခုလို ဝေမျှပေးတာ အထူးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။
Anonymous says 11 November 2008 at 16:19
ဂရုပြုလိုက်နာသင့်တာလေးတွေကို သတိပေးရေးပြထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပိုစ့်လေးတခုပါဘဲဗျာ။
မသက်ဇင် says 19 March 2009 at 11:44
juicy says 20 March 2009 at 05:58
Sofia says 22 December 2009 at 08:39
Very nice Post. I like italot. Be successful :)